‘Somaliland Waxay ka soo Doogsaneysaa Burburkii ka soo Gaadhey Soomaaliya’ | Somaliland.Org
‘Somaliland Waxay ka soo Doogsaneysaa Burburkii ka soo Gaadhey Soomaaliya’
December 6, 2012	By Matthew Newsome
Hargeisa (Somaliland.Org)-Warbaahinta caalamka ayaa wax ka qorysey dhawanahan sida ay Somaliland uga soo kabaneysey burburkii ku dhacey Soomaaliya oo ay qeyb ka aheyd wixii ka horeeyay intaaney la soo noqon madaxbannaanideeda 1991kii.
Warbaahinta kala ah Allafrica, Bussiness report iyo Ips ayaa ka Hadley shirkadaha waaweyn ee u soo tafxeytey siddi ay Somaliland u maalgelin lahaayeen kheyraad kala duwan ee ku jira iyo horaantoodii bilaabeen baadhitaanka iyo sahamainta shidaalka Somaliland kadib markii ay heshiisyi la galeen dawladda Somaliland, kuwaasi oo bilowga sannadka fooda innagu soo haya bilaabaya howshooda.
Matthew Newsome, 3 December 2012 ayaa warbixintan ka qorey howlaha maalgashi ee dhaqaaqey iyo kuwa soo socdaba.
“ Shirkadda Anglo-Turkish company Genel Energy ayaa ka heshay liisanka dawladda Somaliland horaantii November si ay sahamin iyo horumarin ugu sameyso keydadka saliida kadib markii ay ballanqaadey in ay ku bixineyso howlaha baadhista ugu dhawaan adduun gaadhaya 40 million oo dollars.
Sida lagu sheegay war ka soo baxey shirkada Genel Shirkadan madaxabannaan ee saliida iyo gaaska soo saarta ayaa noqotey maalgashadihii ugu horeeyey ee geliya hanti baaxadaa leh ee gasha qeybta tamarta dalka, kadib markii ay baadhitaanadii ugu horeeyay muujiyeen seelal saliid ah oo ballaadhan oo xaqiijisey inuu jiro hab hydarocarbon oo shaqeynayaa.
Lafdhabarta dhaqaalaha qarankan geeska afrika ayaa dhaqan ahaan ku soo tiirsanaa xoolaha nool.
Iyada oo xoolaha nool ee tirada badan oo ku saddex laabmaya tirada dadka ee gaadheysa 3.5 million qof uu ganacsiga xooluhu ka yahay boqolkiiba 65 marka loo eego GDP ga dalka sida uu wasiirka qorsheyntu Dr. Saad Shire u sheegay IPS.
Iyada oo miisaaniyada qaranka mid xadidan oo gaadheysa 120 million oo doollar, ayaa dawlada Somaliland waxa ay imminka bilawdey in ay dakhliga ay sida aadka ah ugu baahan ka hesho maalgeshadayaasha shisheeye ee gaarka ah si ay ugu taageerto dhinaca horumarinta.
Keydadka saliida iyo gaaska Somaliland ayaa soo jiitey indhaha shirkado kale oo waaweyn oo kuwa tamarta ah sida kuwa koofur afrika ee Ophir Energy, Jacka Resources Ltd ee Australia, iyo Petrosoma Ltd, oo gacan saar la leh shirkada British-based Prime Resources waxa ay dhammaantood ku dhawaaqeen in ay diyaar u yihiin in ay maalgashadaan.
Somaliland ayaa waxa ay dhibaato weyni ka heysataa dhinaca aqoonsi la’aanta oo ka dabrayay taageeradii dhaqaale ee ay heli laheyd, waxaana dhawr shirkadaha ceymiska ahi ay u diyaariyeen in ay u ceymiyaan maalgashiga dibada ee dalkan, haseyeeshee maalgashdayaasha ayaa si weyn ugu soo janjeedhsadey in ay u tixgeliyaan il dhaqaale.
Sid oo kale Sababaha aqoonsiga dartood ayaa iyana ka xanibaya taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli laheyd heyada lacagta adduunka iyo baanka adduunka.
Previous PostGuddoomiye Ku Xigeenka Wakiiladda oo ka hadlay Doorashadii Sool ka dhacdayNext PostNatiijaddii doorashadda Hargeysa oo caawa la Shaaciyay	Blog